Uma ungumlingisi we- "Meincraft", ngokuqinisekile uyazi ukuthi kukhona zonke izinto nemvelo ezenziwe ngenguqulo yesikwele. Yiqiniso, umbuzo uvele ngokushesha: kanjani ukwenza okuthile? Isibonelo, kungaba yimuphi uhlobo wokwakhiwa noma into. Namuhla sinqume ukukutshela ukuthi singenza kanjani umbuthano "ku-Maynkraft" njengokulula nangokulungile ngangokunokwenzeka. Eqinisweni, akukho lutho oluyinkimbinkimbi ekudalweni kwalesi sici, kanti okwamanje kunezindlela ezimbili ozothola ngazo ukwenza izinhlelo zakho.
Cabanga ngendlela yokuqala, njengokuthi "ku-Maynkraft" yenza umbuthano. Lolu khetho alunzima, futhi uma ufunda kahle ulwazi cishe wonke ngokushesha futhi ngokufanelekile uthole. Ngendlela yokuqala, sizokwenza isiyingi. Yiqiniso, le nketho ingase ingafanele wonke umuntu. Kodwa-ke, uma ufuna ukwakha isici esidingekayo ngokwakho, ke wazi kangcono indlela engenhla.
Ukuze uphendule umbuzo mayelana nokuthi ungenza kanjani umbuthano ku- "Maynkraft", uzodinga ukuba khona kwanoma yimuphi umhleli wesithombe kukhompyutheni. Uma ufisa, ungasebenzisa uhlelo olujwayelekile lwePaint, olusesistimu yokusebenza. тут уже вам следует выбирать самостоятельно. Ungalanda futhi noma yimuphi omunye umhleli wesithombe - lapha kufanele usuvele uzikhethele.
Sinqume ukucubungula isibonelo ohlelweni lwePaint, njengoba lisetshenziswe inombolo enkulu yabadlali. Qalisa uhlelo bese udweba umbuthano wesayizi esiyidingayo. Kubalulekile ukukhumbula imininingwane eyodwa: uma usetha ubukhulu emdlalweni, umbuthano wakho uzoncishiswa ngephikseli eyodwa. Isibonelo, udwebe isici ngemingcele ye-50 x 50, ngokulandelana, ekugcineni kuyoba nenani le-49 x 49. Ngombuzo wokuthi ungenza kanjani umbuthano "ku-Maynkraft", cishe ucatshangelwe. Noma kunjalo, usadinga ukungeza isici kumdlalo.
Indlela yesibili, echaza ukuthi "ku-Maynkraft" yenza kanjani umbuthano, ngokushesha futhi kulula. Kule ndlela ehlukile, sizosebenzisa izinhlelo ezilungiselelwe abadlali abazenzele zona ngaphambili. Ngendlela, izikhala ezinjalo sezivele ziqukethe kwezinye izinguqulo zesicelo.
Ukuze uqiniseke ngalokhu, udinga kuphela ukubonisa ukulalela kwakho, bese umbuzo wendlela yokwenza umbuthano "ku-Maynkraft" uzoxazululwa ngokuphelele kuwe. Ukusebenzisa ishadi elilungele, ungakhetha wena isici ngemigomo oyidingayo. Ungashintsha umbala nokubukeka usebenzisa umhleli wesithombe. Ungakwazi futhi ukubeka imibuthano yakho edalwe kuma-templates, bese usebenzisa izinketho ezenziwe ngomumo.
Idlalwa kanjani ku-Minecraft nge-Hamachi
I-Game Street Fighter: Abalingiswa. Uhlu, incazelo
A iresiphi elula for ingulube kuhhavini.
Iculo le-Cigarettes "Umthumeli" ephezulu izinga ugwayi